Global Voices teny Malagasy » Sorena Ny Miozolomana Shiita Ao Bahrain Fa Manohana Ny ISIS Ireo Mpanao Politika sy Mpitoriteny · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Jolay 2014 2:24 GMT 1	 · Mpanoratra Noor Mattar Nandika Naomy
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Bahrain, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
Nahatonga ireo Miozolomana Sonita manana ny fahefana hanao fanehoan-kevitra imasombahoaka manilika ara- pivavahana mampidi-doza tsy misy tohiny (sazy) izany hetsika izany, ary nanome fankatoavana ny ISIS vondrona extremista mankahala ny Shiita, izay nanambara vao haingana ny fijoroan'ny kalifà  (Firenena Islamika) ao Iraka.
Noravan'ny tafika ireo fihetsiketsehana tarihin'ny Miozolomana Shiita manohitra ny governemanta Miozolomana Sonita ny tafika tamin'ny 2011, nanomboka teo, voampanga ho nanitsakitsaka ny zon'olombelona mikendry ireo Miozolomana  Shiita i Bahrain. Nitohy milamina  ireo fihetsiketsehana madinidinika. Araka ny filazan'i Mark Lynch ao amin'ny gazetiboky Foreign Policy tamin'ny 2011, «namaly tsy tamin'ny fihetsika maherisetra fotsiny ny fitondran'i Bahrain, fa tamin'ny fandrisihana fanilikilihana tafahoatra ara-pivavahana ihany koa mba hampizarazara ny hetsi-bahoaka sy handrafetana fanohanana ny famoretana ao amin'ny firenena sy ao amin'ny reni-paritra .”
Tamin'ny fiandohan'ity volana ity, tao amin'ny lahatsary YouTube, nanohana ny anti-Shiita ISIS i Turky Albinalim, Bahrainita Sonita mpitoriteny, izay nampangain’ ny Mpanaramaso ny Zon'Olombelona ho naka an-keriny, namono sy nandroaka ireo vitsy an'isa, anisan'izany ny Miozolomana Shiita. Nipoitra tamin'ny lahatsary manambara ny fankatoavany ny khalifa vaovaon'ny ISIS, Abubaker Albaghdadi [amin'ny teny Arabo] i AlBinali:
Tamin'ny herinandro lasa, nanambara nandritra ny valandresaka hoan'ny mpanoratra gazety ilay manampahefana manamboninahitra matanjaka teo aloha, Adel Fulaifel, izay voampanga fa nanao fampijaliana , fa tsy mahatoky (tsy mpino) ilay Shiita mpitondra fivavahana ambony indrindra ao Barhain, Isa Qassim. Nampiany ihany koa fa ho atao hazalambo  izy io. Namaly ny antson'i Isa Qassim hanangana filankevi-pivavahana iraisan'ny Shiita-Sonita izy. Tamin'ny fiandohan'ity taona ity, nanakatona ny filankevi-pivavahana Shiita lehibe indrindra ao amin'ny firenena  i Bahrain, fihetsika izay nampisy ireo andiam-pihetsiketsehana manerana ny firenena.
Roa andro mialoha ny fandrahonana nataon'i Fulaifel, voaraoka  tao amin'ny fanjakana kely manankarena solitany ilay diplaomaty Amerikana, izay nataon'ny tafika an-dranomasina ao Etazonia ho tobi-miaramila nandritra ny taona maro. Iray andro taty aoriana, noarahabaina tongasoa ilay Saodiana mpitoriteny mpiandany sy mahery fihetsika mampiadihevitra, Mohamed Alarefe mba hanome andianà toriteny hoan'ny tanora Bahrainita, na dia teo aza ny tabataba nataon'ireo mpiserasera . Ity mpitoriteny Saodiana ity dia nosokajian'ny Anglisy ho loza mitatao ho azy .
Solombavambahoaka teo aloha, Nasser Alfadhala izay hitsipaka ny fifidianana manaraka avy amin'ny antoko Al-Menbar, (ary ahiahian'ny Fitondram-panjaka Britanika ho tafiditra amin'ny resaka fampihorohorona ) no nanohana mivantana ny ISIS, tao amin'ity lahatsary YouTube tamin'ny volana lasa ity:
Mpikambana mpitarika ao amin'ny vondron'ny mpanohitra goavana indrindra Alwefaq i Almarzooq? Nosamborina sy nentina teo anatrehan'ny fisarana  izy noho ny filanjana ny sainan'ny firaisamben'ny tanora 14 Febroary, izay nitarika fihetsiketsehana tamin'ny 2011.
Tamin'ity volana ity, na dia efa nampitandrina an'i Bahrain aza ny mpanaramaso ara-bola, FMI fa mety tsy hahavita handòa ny karaman'ny mpiasam-panjakana amin'ny taona 2017 , nandràra ireo hotely kintana telo tsy hivarotra alikaola na hampiantrano tarika mpihira ity firenena miankina amin'ny fizahan-tany ity. Nandray mpizaha-tany 2 tapitrisa  isan-taona i Bahrain.
Tamin'ny taona 2011, raha nitsidika an'i Bahrain i Nicholas Kristof, mpanao famakafakana malaza ao amin'ny New York Times, nanasokajy an'i Bahrain ho firenena saiky-mpanavakavaka  izy. Saingy amin'ny maha-mpanohana ny ISIS sy mpitoritenin'ny fankahalàna azy tahaka an'i Fulaifel, dia navela malalaka hiriaria ao Bahrain i Alfadhala sy Alarefe. Efa mihalasa firenena mpanavakavam-bolokoditra feno izy, izay midika ho fanilikilihana ara-toekarana, ara-politika sy ara-tsosialy ny Miozolomana Shiita maro an'isa ao amin'ny firenena.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/07/28/62425/
 nanambara vao haingana ny fijoroan'ny kalifà: http://www.nbcnews.com/storyline/iraq-turmoil/islamic-state-declares-caliphate-seizes-osama-bin-ladens-dream-n144221
 fanavakavahana ara-politika sy ara-toekarena : https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/2012-special-coverage/bahrain-protests-2011/
 Noravan'ny : http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14540571
 Nitohy milamina: https://globalvoicesonline.org/2013/10/25/bahrain-more-tear-gas-than-people/
 Mark Lynch : http://www.foreignpolicy.com/posts/2011/03/16/bahrain_brings_back_the_sectarianism
 fanomezam-pahefana ireo mpitoriteny : https://mg.globalvoices.org http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/06/bahrain-jihadists-syria-salafism.html# with
 voampanga fa nanao fampijaliana: http://www.bahrainrights.org/en/node/2931
 ho atao hazalambo: https://www.youtube.com/watch?v=mH7xxbjOke4
 nanakatona ny filankevi-pivavahana Shiita lehibe indrindra ao amin'ny firenena: http://www.presstv.com/detail/2014/02/01/348711/bahrain-cleric-slams-council-dissolution/
 ny tabataba nataon'ireo mpiserasera: https://globalvoicesonline.org/2014/07/07/regional-terrorism-reaching-bahrain/
 Nosamborina sy nentina teo anatrehan'ny fisarana: http://edition.cnn.com/2013/09/18/world/meast/bahrain-opposition-leader-arrest/
 Nahazo tsikera noho ny politikam-panavakavahana ara-pivavahana : http://www.huffingtonpost.com/brian-dooley/bahrains-soldier-sailor-s_b_4745595.html
 mety tsy hahavita handòa ny karaman'ny mpiasam-panjakana amin'ny taona 2017: http://www.alayam.com/News/alayam/Parliament/256877
 mpizaha-tany 2 tapitrisa: http://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Bahrain